Ny famaritana ny demokrasia dia ny fitondrana samirery - The Word Foundation
Famaritana fohifohy momba ny demokrasia ny governemanta
Atoa Percival dia manome ny hevitry ny demokrasia "True" tany am-boalohany sy tanteraka, izay itondrana ny raharaham-pahamarinana mandrakizay sy ny raharaham-pirenena.
Tsy boky ara-politika izany, araka ny fanazavana amin'ny ankapobeny. Asa goavambe tsy dia mahazatra no manome endrika mazava ny fifandraisana mivantana eo amin'ny tena fahatsapana amin'ny vatan'olombelona tsirairay sy ny raharahan'izao tontolo izao izay iainantsika.
Tamin'ny vanim-potoana manan-danja teo amin'ny sivilizasionantsika, dia nipoitra ny hery vaovao amin'ny fandringanana izay mety hahatsikaritra ny fametahana ho an'ny fiainana eto an-tany tahaka ny ahafantarantsika azy. Na izany aza, mbola misy ihany ny fotoana ahafahana mandresy ny onja. Percival milaza amintsika fa ny olombelona tsirairay dia loharanon'ny antony, ny toe-javatra, ny olana ary ny vahaolana. Noho izany, isika tsirairay dia manana fahafahana, ary koa adidy, hitondra ny Lalàna mandrakizay, ny rariny ary ny Harmony ho an'izao tontolo izao. Izany dia manomboka amin'ny fianarana hitantanana ny tenantsika-ny firehetam-pontsika, ny filaharantsika, ny filantsika ary ny fitondrantenantsika.
"Ny tanjon'ity boky ity dia ny manondro ny làlana."